Banyere Anyị - Fujian Snowman Co., Ltd.
Fujian Snowman Co., Ltd. nke e guzobere na March, 2000 ma depụta ya na ọha na eze na Shenzhen Stock Exchange na Dec, 2011 (Usoro ahia: 002639). Snowman, bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke nwere teknụzụ compressor dị ka isi, ọpụrụiche na mmepe, imepụta, nrụpụta, ahịa, nrụnye na ọrụ ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe & azụmaahịa na ebe nchekwa oyi na nchekwa nchekwa yana ngwugwu zuru ezu nke usoro friji na ice na-eme usoro.
Isi na Fujian Fuzhou Binhai Industrial District, SNOWMAN nwere ogige ntụrụndụ abụọ: Binhai Industrial Park na Liren Industrial Park. N'ime ya, mpaghara nke 1 nke Binhai Industrial Park na-ekpuchi ihe karịrị 80 acres, ebe Liren Industrial Park guzobere, na-ekpuchi ihe karịrị 156 acres. Usoro nke 3, Guhuai Industrial Park, nke a kwadebere, ga-ekpuchi ihe karịrị 3000 acres.
Ndị ọzọ ọdịnaya
Snowman na-etinye aka na nyocha na mmepụta nke sistemu jụrụ oyi, mmiri chillers, nchekwa ice na igwe igwe ndị ọzọ. Anyị isi na ngwaahịa na-agụnye: Industrial chillers, Flake ice igwe, tube ice igwe, Block ice igwe, Efere ice igwe, na Concrete jụrụ usoro. Ezubere igwe akụrụngwa anyị maka mmepụta kwa ụbọchị site na 0,5 ruo 80 tọn. N'ihi na nnukwu ice Ndinam usoro, dị ka ihe jụrụ usoro, Snowman nwekwara ike inye a keukwu imewe, dị ka gị kpọmkwem mkpa.
Snowman enwetawokwa IS09001, IS014001, 0HSAS18001 na CE CE, nwetara Pressure Vessel Ⅰ, Ⅱ, License Designing and Manufacturing License, PED & ASME Designing and Ngwuputa Nrụpụta, Pipeline Pipeline GC2 / GC3 Design and License License, Pipeline Pipeline GC2 Nwụnye na Nlekọta License, Akwụkwọ Azụ Azụ Azụ Azụ,Akwụkwọ mgbawa na-egosi mgbawa yana ikike asambodo nke abụọ maka nka na elektrọnik General Engineering nkwekọrịta.
ISO9001 International Quality System Asambodo OHSAS 18001 asambodo
Asambodo PED nrụgide
OA asambodo maka SRM Compressor Unit
WST ịghasa Mgbasawanye Unit na Compressor Unit
ASME Asambodo nyocha
P1001-112-I-08 (WNG series) P1001-112-I-09 (YF usoro)
P1001-112-I-10 (YF-XR series) CE Nyocha
Achọrọ Snowman inye azịza kacha mma dị jụụ na ụgwọ dị ala. Gburugburu nhọrọ ụgbọ njem gbara gburugburu dị ka ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ mmiri, na n'okporo ụzọ awara awara, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa anyị ọnụahịa kachasị dị ala. Anyị nwekwara usoro mmepụta ihe maka ngwaahịa anyị kachasị ewu ewu. Site na ụgwọ ụgwọ ụgbọ mmiri na imepụta ngwa ngwa, Snowman nwere ike ịnye ihe ngwọta na-eme ice na ego ọnụ.
Ebe ọ bụla e nwere ngwaahịa Snowkey, e nwere ọrụ Snowman. All anyị ngwa na-nyere dịkarịa ala otu afọ akwụkwọ ikike maka free nnọchi ma ọ bụ ndozi. Snowman na-enye ndị ahịa anyị ọrụ ụbọchị niile. Site na ndị ọrụ ịzụ ahịa azụchara azụ, Snowman nwere ike ịnye gị ụzọ kachasị mma n'oge kachasị dị mkpirikpi, ọ bụrụ na ịnwee nsogbu ọ bụla.
Snowman nwere ike ịmepụta igwe ice ice 5000 kwa afọ. N'ihi ngwa sara mbara na ọnụ ala nke ngwaahịa anyị, ha enwetawo nnukwu ewu ewu na America, Canada, South Africa, Nigeria, Turkey, Brazil, Cuba, France, Russia, Singapore, na ndị ọzọ. Site n’ịchọ ahịa mgbe nile nke ngwaahịa anyị n’ahịa, Snowman na-agba mbọ ugbu a ịbụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ike karịa.
Na Snowman, anyị na-enyekwa ọrụ OEM n'elu arịrịọ. Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
Kemgbe ntọala anyị, Snowman dọtara ọtụtụ ndị ọrụ na ndị injinia nwere ahụmịhe. N'ihi nke a, anyị ehiwela ndị otu tozuru etozu nke ndị injinia nwere ahụmahụ bụ ndị nwetaworo ikike nzere mba isii maka Snowman.
Snowman na-enwe ọganihu na ntị na nkọwa. A na-enyocha ihe ọ bụla nke sistemụ jụrụ anyị nke ọma, iji kwekọọ n'ụkpụrụ ISO9000. Tụkwasị na nke a, a na-ebubata 80% nke ngwa sistemụ ice na-eme ice. Nke a bụ otu anyị si nwee ike ịnye sistemu jụrụ oyi kacha mma.
Mmanụ mmanụ na-ajụ oyi (WNG33.7) Onye na-ekewa mmanụ (YF600)
Akwụkwọ asambodo nkewa mmanụ (YF-XR26L-CE CE
Ice osisi (obere nha) igbochi igwe akpụrụ
Automatic ice nchekwa tank OA Nyocha
Ice osisi Air mma, Mmiri mma, Single）
Mkpakọ unit, SRM usoro emeghe ịghasa Compressor OA Nyocha
Akwụkwọ ule maka usoro usoro friji nke igwe akpụrụ mmiri
Akwụkwọ ule maka imepụta condenser
Akwụkwọ ule maka ọkpọ igwe akụrụngwa akụrụngwa nyocha
Asambodo nyocha nyocha GLQ (MX) 240 (OA)
Asambodo Ule Nleba maka EvaporatorGK82.5
Akwụkwọ nke Uche Ule maka Nyocha CondenserWNF132
Akwụkwọ nke Nyocha Nyocha nke Economy ZL-XR26M-A
P-1001-112-I-16 GYF usoro
Nchekwa Refriji System （WZF, LZF, GZA） OA nyocha
SW usoro friji ịghasa Compressor
SRC 134 usoro Compressor (ọkara akara friji ịghasa Compressor)
SP usoro Compressor (nke emechi emechi pistin Compressor) OA Nyocha
Mkpokọta nyocha nke mmanụ mmanụ (YF300 ， YF350 ， YF500)
Nnyocha nyocha nke imepụta ihe eji arụ ọrụ nke ngwaọrụ atọ
Nnyocha nyocha nke usoro friji
Imewe nke ike ike na nchekwa OA nyocha